Dhir macaan iyo macmacaan Dutch | Safarka Absolut
La gastronomy ee Nederland ma lahan sharaf iyo dhaqan ay leeyihiin wadamada kale ee Yurub sida Faransiiska, Isbaanishka ama Talyaaniga. Taabadalkeed, Cuntada Dutch si weyn ayaa looga aqoonsan yahay adduunka oo dhan. Nederlandku waxay isku qeexaan inay yihiin ilig macaan oo aan la khaldami karin oo ku raaxeysta karinta iyo dhadhaminta dhammaan noocyada macmacaanka iyo macmacaanka.
Kahor intaadan sii wadin, waa tan digniin: boostada maanta waxaa ka buuxa macmacaan iyo damacyo. Lagugula talin maayo inaad u sii wadato akhriska kuwa ku jira cuntada:
1 Macmacaanka Nederlandka caadiga ah
1.1 Tuujinta zoute
2 Cuntada kirismaska ​​ee Dutch
2.1 Kukiyadaha 'Saint Nicholas'
Macmacaanka Nederlandka caadiga ah
Waa liquorice macaan oo si ballaaran looga cuno Holland, laakiin sidoo kale Belgium, Luxembourg iyo qaybo ka mid ah Jarmalka. Ku zoute dhibic ("Dhibic milix leh") waxaa lagu iibiyaa xabadaha yaryar ee madow. Muuqaalkeedu wuxuu lamid yahay kan caloosha leh dhadhankiisuna aad buu ugu eg yahay kan liisanka. Waxaa jira afar nooc oo kala duwan oo kuxiran xaddiga milixda ay ku jiraan.
Khamriga caanka ah ee Dutch-ka, khamriga zoute
Nederlandku waxay ku sifeynayaan waxyaabo gaar ah oo daaweyn ah inay hoos u dhigaan dhibic, in kastoo ay runti u cunaan maxaa yeelay way jecel yihiin. Meelaha rootida lagu dubo qaarkood waxaa lagu iibiyaa dhadhanka nuxurka qumbaha, reexaanta, malabka, caleemaha iyo dhadhannada kale.
Tani waa nooc jilicsan, caramelized ee waffle caadiga Belgian (af Dutch, ciriiri macnaheedu waa sharoobada iyo waffle waa waffle). Macmacaankan waxaa lagu diyaariyey digsi gaar ah oo loo qaybiyay laba jibbaarane. Cajiinka waa la gooyaa si iskiis ah loogu shubo karamellka gudaha inta la diyaarinayo.
Stroopwafel: waa nooc ka mid ah waffleyaasha qaab-dhismeedka waffle-qaabeeya ee caanka ah
Meelo badan ayaa lagu diyaariyaa iyada oo lagu darayo geedo yaryar oo la jajabiyey oo leh stroop, halka meelaha kale cajiinka lagu kariyey qorfe. Natiijadu had iyo jeer waa mid cajiib ah.
Kuwa caanka ah vlaai Waa keeg macaan oo laga sameeyay cajiinka khamiirka oo ka buuxan miro (tufaax, abrikot, cananaaska, tubta ama berry). Cunnooyinka khafiifka ah ee Nederlandka qaarkood, maaddooyinka kale sida Kastard ama rhubarb ayaa sidoo kale lagu daray.
Waxaa jira noocyo aad u qaas ah oo ah vlaai dhaqameed. Midka bariiska ah, tusaale ahaan, waxaa laga buuxiyaa bariis iyo kareem, in kastoo ay jiraan kuwa kale oo kareemo la shiilay ama shukulaatada.
Adoo maraya waddo kasta oo ku taal magaalo kasta ama magaalo ka mid ah Nederland, waa wax iska caadi ah in sankeenna lagu sasabo caraf udgoon aan la adkeysan karin oo ah poffertjes. Dalka oo dhan waxaa ku yaal meherado yaryar oo waddooyinka lagu iibiyo oo kuwaan yaryar xilligan lagu diyaariyo canjeelo kulul oo leh subag dhalaalay iyo sonkor budo ah.
Sidoo kale makhaayadaha Nederlandka, poffertjes waxaa loo iibiyaa cunto fudud oo macaan si loogu raaco kafee ama shaah. Xitaa waxaa jira dukaamo ku takhasusay sheygan, oo loo yaqaan poffertjeskraam.
Cuntada kirismaska ​​ee Dutch
Cuntada Nederlandka ayaa si gaar ah u kala duwan waqtiga Kirismaska. Xaaladaha gaarka ah waxay wacaan dhadhan gaar ah. Ku Navidad ee gobolada hoose wuxuu bilaabmayaa in loo dabaaldego 6-da Diseembar, maalinta Saint Nicholas (Sinterklaas).
Kukiyadaha 'Saint Nicholas'
Maalintii imaatinka Saint Nicholas hadiyadoodii, carruurta Nederlandku waxay ku macaaneeyaan sugitaanka iyagoo cabaya shukulaato kulul iyo cunista buskudka. Dadka waaweyni sidaas oo kale ayey yeelaan, in kastoo ay galaas khamri ah gacanta ku hayaan.
Pepernoten ee Maalinta Saint Nicholas
Piet, kaaliyaha Saint Nicholas, ayaa mas'uul ka ah qaybinta macmacaanka carruurta yaryar: xikmad (buskud yar oo qaab aan caadi ahayn u sameysan oo laga sameeyay galley, malab iyo anise) iyo kruidnoten sinjibiil. Waxay sidoo kale u qaybisaa qaybo ka mid ah garabka, buskud buunbuuni ah oo ay ka buuxsantay xabbad yicib ah.
Sida meelo badan oo adduunka ka mid ah, Maalinta Ciidda Kirismaska ​​ee Nederland waxaa looga dabaaldegaa qoys ahaan miis si fiican u buuxa. Casuumaddu waxay ku dhammaanaysaa iyadoo kerststol, rootiga sabiib miraha ah oo badanaa sidoo kale laga buuxiyo cajiinka yicibta. Keeggan, oo ah habka caadiga ah ee lagu dubo rootiga Nederlandka, wuxuu lamid yahay kan lagu diyaariyey Jarmalka iyo waddamada kale ee Bartamaha Yurub.
Jeeriga cashada kirismaska ​​ee Nederland: kerststol
Qoysaska diinta badan waxay doorbidaan inay ku beddelaan kerststol macmacaan kale oo gaar ah: la kulmey muuse, Keeg isbuunyo Dutch ah oo lagu daboolay anise sonkor ah. Waa macaanida lagu xuso dhalashada Ciise iyo in fidinta sidoo kale loo adeego si loogu dabaaldego dhalasho kasta sanadka oo dhan.
Habeenki sanadka cusub, urka saliida ee ka soo shilalka qotada dheer ee jikada ka imanaya waxay ku badan yihiin guryaha Nederland. Dhexdooda macaan oliebollen, Cajiinka cajiinka oo kaligood lagu shubo sonkor la rusheeyey ama ka buuxsamey jajab tufaax iyo sabiib.
Macaankii ugu fiicnaa ee bilawga sanadka: Oliebollen
Waxaa jira noocyo gobol oo oliebollen ah (tarjumaad: "saliid buns"). Nawaaxiga Limburg, tusaale ahaan, waxay u egyihiin digaagga sidoo kale waxay diyaar u yihiin inay xusaan Carnival. Dhinaca kale, gobollada woqooyi fritoriyeyaashan waxaa loogu diyaar garoobay daryeel gaar ah waxaana si gaar ah loo soo koobay, ku dhowaad goobaaban.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Dabeeto Dutch iyo macmacaan